S.Africa says Zimbabwe on correct path » Capital News
By , PRETORIA, Aug 12 – South African President Jacob Zuma will tell a regional summit next week that Zimbabwe is "on the correct path" under its unity government, a foreign ministry official said on Thursday.
"He will recognise that the task in Zimbabwe is not completed but the overwhelming picture is favourable," foreign ministry director general Ayanda Ntsaluba told a news conference in Pretoria.
"There is a semblance of stability and Zimbabwe is on the correct path," Ntsaluba said.
The constitutional process has barely gotten off the ground, but the new government has halted Zimbabwe\_’s stunning economic freefall by abandoning the local currency in favour of US dollars and opening up the market to imports.
South Africa also backed Zimbabwe\_’s sale of an estimated 72 million dollars worth of diamonds on Wednesday, in the first approved auction of the gems from its Marange fields since the global "blood diamonds" watchdog partially lifted a ban.
"This is a legitimate process and Zimbabwe is beginning to use its natural resources to improve the lives of its people," Ntsaluba said.